Xoogaga Wadaniyiinta oo ka qeyb galaya furitaanka Baarlabaanka JFS - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Xoogaga Wadaniyiinta oo ka qeyb galaya furitaanka Baarlabaanka JFS
Xoogaga Wadaniyiinta oo ka qeyb galaya furitaanka Baarlabaanka JFS
Sida ay saraakiil ka tirsan Villa Somalia u xaqiijiyeen MOL waxa lagu wadaa in maalinta berrri ah la furo kalfadhigii Baarlabaanka JFS. Furitaanka aya waxa loo diyaariyay qaar ka mid ah xoogagga wadaniyiinta Gobolka Banaadir iyadoo la farary Gud. Cumar Filish in uu soo bixiyo 2500 qof oo ka mid ah shacabka Gobolka Banaadir si loo muujiyo taageerada MW Farmaajo uu ka haysto shacabka Muqdisho.
Xoogagga wadaniyiinta aya wada qorshe lagu indho sarcaadinayo beesha caalamka si loo tuso in MW Farmaajo haysto taageerada ugu badan shacabka Muqdisho. Waxaa loo qeybinaya haweenka iyo dhalinyarada boorar ay ku qoran yihiin “Qaran Dumis Dooni Mayno” “Dagaal ooge dooni meyno” “Dagaal sokeeyo dooni meyno”
Ujeedka ugu weyn ee loo soo bixinayo shacabka intaa la eg aya ah in lagu sumcad dilo Madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Sharif, kaddib markii ay ka biyo diideen is hortaagii lagu sameeyay MW Sheekh Sharif xilli uu u socday magaalada Kismaayo si uu uga qeyb galo caleema saarka Axmed Madoobe.
Waxaa sidoo kale weli ay saaran tahay xayiraad labada Madaxweyne iyago loo diiday in ay dalka ka baxaan. Farmaajo aya amar ku bixiyay in Sheekh Sharif & Xasan Sheekh aanay dalka ka bixi karin isagoo ka cabsi qaba in ay ka qeyb galaan caleema saarka Axmed Madoobe.
Waxaa maanta garoonka Adan Cadde laga soo celiyay ku dhowaad 40 xildhibaan oo u socday magaalada Kismaayo si ay uga qeyb galaan caleema saarka Axmed Madoobe oo lagu wado in uu dhaco 9 bishan Oktober.
Lama oga tallaabada xigta ay qaadi doonaan labada madaxweyne ee la saaray xayiraadda in ay ka baxaan magaalada Muqdisho.
Previous articleRag hubeysan oo toogasho ka geystay MUQDISHO
Next articleFarmaajo oo amray in Caleemasaar 3aad loo sameeyo Cumar Filish (Sababta ogoow)